बुढी औँला ठूलो हुने व्यक्ति स्मार्ट, तपाईको खुट्टाको औँला कस्तो ? – Sandesh Press
बुढी औँला ठूलो हुने व्यक्ति स्मार्ट, तपाईको खुट्टाको औँला कस्तो ?
June 13, 2021 497
मानिसको व्यक्तित्वलाई खुट्टाको औंलाले झल्काउँछ। खुट्टाको औंलाको आकारलाई हेरी तपाईंको व्यवहारबारे बुझ्न सकिन्छ । तपाईंको चरित्रलाई खुट्टाको औंलाले संकेत गर्छ भन्ने कुराको विश्वास गरिन्छ ।
ठूलो औंला : खुट्टाको ठूलो औंला वा पहिलो औंला अरु औंलाभन्दा धेरै लामो छ भने, त्यस्ता व्यक्ति स्मार्ट र क्रियटिभ स्वभावका हुन्छन् । समस्याको छिट्टै समाधान गर्न सक्छन्।
त्यसैगरी तपाईंको ठूलो औंला अरु औंलाभन्दा सानो छ भने, एकै समयमा धेरै काम गर्न सक्ने क्षमताको संकेत गर्छ ।दोस्रो औंलास् खुट्टाको दोस्रो औंला लामो हुने मानिसहरु लीडर बन्न सक्ने गुण भएका हुन्छन्। यीनीहरुमा गतिशिल र सृजनात्मक गुण हुन्छ ।
तेस्रो औंलाः खुट्टाको तेस्रो औंला लामो भएका व्यक्तिहरु आफ्नो काममा उर्जावान र सिपालु हुन्छन् । यीनीहरु जीवनमा पूर्णता चाहन्छन् । र यीनीहरुले जीवनमा धेरै चीज प्राप्त गर्छन् ।
आफ्नो कामको लागि परिवार , प्रेम र मनोरञ्जनलाई पनि बिर्सन सक्ने यीनीहरुको नराम्रो स्वभाव हुन्छ । त्यसैगरी तेस्रो औंला सानो भएका व्यक्तिहरुले भने जीवन धेरै रमाईलो पूर्वक बिताउँछन् । यीनीहरु जीवनमा काम गर्न भन्दा आराम लिनमा रुची राख्छन् ।
चौथो औंलाः चौथो औंला लामो भएका व्यक्तिले आफ्नो परिवारलाई निकै नै महत्वपूर्ण मान्छन् । यदि तपाईंको चौथो औंला घुमाउरो किसीमको छ भने , प्रेमसम्बन्ध निकै नै नराम्रो हुन्छ । चौथो औंला सानो भएका व्यक्तिहरुका लागि परिवार र सम्बन्ध त्यति महत्वपूर्ण हुदैन।
सानो औंलाः अन्तिम औंला सानो भएका व्यक्तिहरुको स्वभाव बच्चाको जस्तो हुन्छ। यीनीहरु जिम्मेवारी बहन गर्न मनपराउँदैनन्। र चाडैं निराश हुने गर्छन् । यस्ता व्यक्तिहरु रमाईलो गर्न मनपराउँछन्।
Prevयी ५ किसिमका व्यक्तिले भुलेर पनि नखानुहोस् लसुन, नत्र…
Nextदीपक मनाङे अब गृहमन्त्री !
रोल्पामा पहिरोले घर पुरिँदा एकै परिवारका ३ जनाको ज्यान गयो